Jimco, Oktoobar 23, 2015 Isniin, Disembar 7, 2020 Douglas Karr
Ma hubo waxa aan sameyn karno haddii aan lahayn wadashaqeyn wax soo saar ah. Markaan ka shaqeyno shaxanka, waraaqaha cad, iyo xitaa qoraalada baloogyada, geeddi-socodkeenu wuxuu ka socdaa cilmi-baarayaasha, qorayaasha, naqshadeeyayaasha, tifaftirayaasha iyo macaamiisheenna. Taasi waa dad aad u tiro badan oo ku lug leh inay u gudbiyaan faylasha gadaal iyo gadaal inta udhaxeysa Google Docs, DropBox ama emayl. Waxaan ubaahanahay habab iyo qaabeyn si aan horey ugu sii wadno horumarka daraasiin
Wrike waa madal wadashaqeyn oo loo adeegsado hagaajinta wax soo saarka waxyaabaha ku dhex jira ururkaaga. Waxay u tixraacaan tan sida mashiinka wax lagu qoro oo ay ku sifeeyaan tobanka shey - labadaba ha'ayada iyo madal - taasoo ka dhigaysa wax soosaarka maaddooyinka mid wax ku ool ah. Muxuu yahay Mashiinka Mawduuca? Mashiinka maaddadu waa dadka, geeddi-socodka, iyo aaladaha keena tayada-sare, ujeeddooyinka iyo is-waafajinta noocyada kala duwan ee warbaahinta, oo ay ku jiraan waxyaabaha ku jira baloogyada, webinarrada, buugaagta elektaroonigga ah, bogagga macluumaadka, fiidiyowyada